को'रोनाको नयाँ भेरि'एन्ट कति खत'रनाक ? - हेर्नुहोस - Dainiki Khabar
को’रोनाको नयाँ भेरि’एन्ट कति खत’रनाक ? – हेर्नुहोस
९ असार २०७८, बुधबार ११:३७ admin
नेपाल र भारतमा फैलि’एको डेल्टा भेरि’एन्टको को’रोनाभाइरस उत्परि’वर्तन अर्थात् म्युटे’सन भएर डेल्टा प्लस भेरि’एन्ट बनेको छ । एवाई.१ पनि भनेर चिनिने भा’इरस सजिलै फैलिन्छ, फो’क्सोको को’शिकामा सजिलै टाँसिन्छ र मो’नोक्लोनल ए’न्टीबडी थे’रापी जस्तो प्रभा’वकारी उपचारलाई पनि यसले प्रतिकार गर्छ ।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, डेल्टा प्लस भेरि’एन्ट भारतमा पहिलोपटक गत अप्रिल महिनामा फेला परेको थियो । महाराष्ट्र, केरल र मध्य प्रदेशका ६ जिल्लाबाट संकलित २२ वटा नमूनामा यो भे’रिएन्ट भेटिएको हो ।
यही भेरि’एन्ट नेपाल लगायत अन्य नौ देशमा पनि फेला परेको छ ।
भाइ’रसहरू जतिखेर पनि उत्परि’वर्तित भइरहेका हुन्छन् र अधिकांश परिवर्तनहरू परिणाममुखी हुँदैनन् । केहीले त भाइ’रसलाई नै हानि गर्छन् । तर अन्यले रोगलाई थप संक्रा’मक वा जोखिमयुक्त बनाउँछन् । अनि यस्ता उत्परिवर्तनहरूले प्रभुत्व जमाउने गर्छन् ।
तर अग्रणी भाइ’रोलोजिस्टहरूले डेल्टा प्लसलाई चिन्ताजनक भेरि’एन्टको वर्गमा राख्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यो भेरि’एन्ट बढी सं’क्रामक रहेको वा यसले अन्य भेरि’एन्टको तुलनामा कडा रो ग लगाएको भनी प्रमाणित गर्न पर्याप्त आँकडा उपलब्ध नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्थात्, यो भेरिएन्टलाई अहिले उपलब्ध खोपबाट जन्मिने एन्टीबडीले रोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा भारतलाई थप आँकडा आवश्यक छ ।
अनि यो भेरि’एन्टको सं’क्रामकता, निदानका विफलता लगायतका विषयमा व्यापक डेटा आवश्यक छन् । यसले कडा रो ग लगाउँछ कि लगाउँदैन भन्ने पत्ता लागिसकेकै छैन । लोकन्तर बाट
Previous नेपालमा को’रोनाको नयाँ प्रजाती फेला
Next हेलिकोप्टरमा उड्दा-उड्दै राजेन्द्र महतोको मन्त्री पद चैट